Ntuziaka profaịlụ LinkedIn: Ultimate Visual Guide to MasteringIn LinkedIn
Tuesday, February 9, 2021 Tuesday, January 11, 2022 Douglas Karr
Enwere otutu ọgba aghara ugbu a na mpaghara azụmahịa. Achọpụtala m onwe m ọtụtụ obere azụmaahịa na-emefu ngwa ahịa na-efe efe n'oge ọgbụgba na njikọta metụtara ya. N'otu oge, agbanyeghị, anọ m na-elele ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike inweta ezigbo ọrụ na nka.
Anọ m na-adụ ọtụtụ ndị nọ n'ụlọ ọrụ m ọdụ ka ha gbanwee echiche ha na profaịlụ LinkedIn na ụlọ ọrụ ndị ka ukwuu. N'ime ọgba aghara akụ na ụba ọ bụla, ụlọ ọrụ ndị nwere akpa miri emi na-ahụ ohere itinye ego, ego, ma kwadebe maka usoro uto ha ọzọ. Obere azụmaahịa enweghị ego iji mee nke a.
Anyị ebiela akwụkwọ ntuziaka infographic na Nkọwapụta LinkedIn, gụnyere Ndụmọdụ profaịlụ Linkedin na Optimizing a Nkọwapụta LinkedIn maka ire ere ọha, ma nke a Ultimate eji Aghọ Aghụghọ Ule Akwụkwọ si Oge Ntụrụndụ bụ ezigbo akụ na ụba maka ijide n'aka na ị na-ebuli njikọ LinkedIn n'ụzọ zuru oke maka ịkparịta ụka n'andntanet na nyocha ọrụ.
Imaara na profaịlụ Linkedin zuru oke zuru oke karịa ugboro 40 nwere ike inweta ohere ọrụ?
Ntuzi kachasị na profaịlụ LinkedIn gụnyere Nzọụkwụ 7
Zuru okè Profaịlụ - Were onwe gị onye na-ese foto mara mma ka ị weghara ụdị mmadụ foto ahụ, ma jupụta n'ọhịa niile nke LinkedIn na-agagharị gị! Foto LinkedIn setịpụrụ mmetụta mbụ dị egwu.
Nha Foto - Ezigbo onyonyo onyonyo dị mma na ngwaọrụ ọ bụla, gbaa mbọ hụ na ị gbasoro nkọwa nke LinkedIn na-enye yana edepụtara n'okpuru na infographic.
Mgbasa maka Aro - Mgbe mmadụ gwara gị etu ị siri mee nke ọma, jụọ ha maka nkwanye site na LinkedIn! Ha ga-esonye na ọrụ ọrụ ọ bụla ị mejupụtara.
Nzuzo Njikọ LinkedIn - Sonyere ndi otu, Were ihe edeturu na LinkedIn ma hu na igosiputa ihe ngosi slideshare ebe ahu!
Chọta na LinkedIn - Hazie URL gị, jiri aha aha kachasị maka aha ọrụ, ma jikọta njikọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Atụmatụ LinkedIn kwa ụbọchị - inye uru, ịkekọrịta ndụmọdụ, ijikọ netwọkụ gị na ndu, yana ịbụ ezigbo onye na-elekọta netwọkụ gị ga - enyere gị aka ịbụ nna ukwu LinkedIn.
Chebe profaịlụ gị - Ọtụtụ mmadụ na - abụkarị ihe echefuru maka atụmatụ aghụghọ mana ezubere iche maka ike ojoo. Kwado nyocha nke abuo ka ndi folks ghara ijide akaụntụ gị.
Y’oburu n’acho ochicho ohuru ma choo ime ka i nwekwuo ohere, igha acho itinye ego gi Premium LinkedIn. Ọ na - enye gị ọhụhụ dị ukwuu karịa n'ime nyocha dị n'ime ma na - enyere gị aka ịmekwuwanye ọrụ na atụmatụ ndị a:
Ozi InMail - jikọtara ndị njikwa ego.
Kedu onye lere profaịlụ gị - lee onye lere profaịlụ gị n'ime ụbọchị 90 gara aga.
Usoro Ọmụmụ LinkedIn - nweta ihe omumu nkuzi nke LinkedIn nke ndi 15,000 na-eduzi iji meziwanye nkà gi ma obu muta ihe ohuru.
Nkwadebe Ajụjụ ọnụ - wulite obi ike gị ma kwụrụ ụgwọ ijikwa ndị isi na ajụjụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu, azịza ajụjụ ndị ọkachamara kwadoro, na ndị ọzọ.
Infographic site na Oge Ntụrụndụ, ụlọ nke ile ọbịa, egwuregwu na azụmaahịa na UK.
Tags: oge ezumikeLinkedInọdịnaya jikọtaraprofaịlụ njikọndu profaịlụNjikọ profaịlụ jikọtaraAtụmatụ njikọ profaịlụebuli jikọrọ
Nke ahụ ga-abụ nke kacha ogologo… M pụtara ozi kacha nke ọma mgbe ọ bụla! 😉
Ama m ezigbo? Ma e bu m n'isi. 🙂
Douglas, post dị egwu!
Echiche nkọwa mara mma nke ndị ọrụ LinkedIn na-achọ ọganihu ọrụ.
Daalụ, blọọgụ gị na-enyere aka nke ukwuu.